Backpack Deluxe – Bhora
Backpack banner bhora rinoshandisa imwechete deluxe bhegi, kureruka uremu hwakaumbwa 3D-furo kumashure pani ine cushion uye mhepo inoyerera chiteshi dhizaini, Straps inogadziriswa, inopa yakasununguka kushandisa ruzivo;Iva nehomwe inokubatsira kuchengeta mapepa ekushambadzira, ichikusiya uine maoko emahara.
Bhora rinoshandisa huremu hwekabhoni composite fiber pole sefuremu, rinotora chimiro chekupeta, chakafanana neamburera kana mwenje, simbisa kumisikidza kana kudonha zviri nyore, zvakare chengetedza chimiro chakanaka kunyangwe paine mhepo.
Chiedza che LED (chisina kuisirwa) chinogona kuiswa mukati mebhora kuti chivheneke mufananidzo wako murima sechisarudzo
Kushandisa 240g tension jira kugadzira pillowcase graphic yebhegi bhora rinokurudzirwa, izvi zvinobvumira jira graphic kutambanudza pamusoro paro kupa bhora chimiro zvakanaka.
Innovation yekuisa mureza dhizaini, yakatangwa kugadzirwa neWZRODS pasi rese
Chiedza-huremu chakaumbwa 3D-furo rekumashure ine cushion uye inobvumira kuyerera kwemhepo dhizaini dhizaini, inopa yakasununguka kushandisa ruzivo.
Pole mucarbon composite fiber, simba repamusoro & rakasimba kupfuura aluminium kana plastiki pole
Bhora rekubhegi Bhora dhiyabhorosi 80cm 2KG 54*30.5*5.5CM
Zvakapfuura: Backpack Deluxe - B
Zvinotevera: Backpack Deluxe - O